Kwehliswe umholo woweBafana ngenxa yokuhlasela kweCorona
UBONGANI Zungu weBafana Bafana kudingeke ehliselewe iholo eqenjini lakhe laseFrance ngenxa yegciwane iCorona
Mthokozisi Mncuseni | March 25, 2020
INJINI yeBafana Bafana enguBongani “Ben 10” Zungu edlala eFrance, okungelinye lamazwe ashayeke kakhulu ngenxa yegciwane iCorona, iphoqeleke ukuthi ivume kwehliswe iholo layo ngoba iqembu liyahluleka ukumelana nezindleko zalo ngenxa yesimo.
Ngokwemibiko evele eFrance, uZungu uyafana nomuntu ongenalo itoho ngoba uma lesi simo siqhubeka iqembu lakhe i-Amiens, lizogcina lihluleka ukukhokha kwayona le ehhafuliwe.
Kuze kube manje iFrance yiyona eshayeke kakhulu emzweni ase-Europe ngenxa yeCovid19 okufakazelwa wukuthi sebengu-16 481 abanegciwane khona, sekufe abangu-674.
Ngenxa yokuqina kwemithetho elawula ukuhamba kwabantu emigwaqweni kube nomthelela hhayi ekutheni kudlalwe kuphela, kepha nokuziqeqesha kwamaqembu kuphazamisekile. Ngenxa yalokhu nabaxhasi abebengenisa imali ngezindlela eziningi bamile njengoba kume yonke into eFrance.
Iqembu likaZungu, i-Amiens, elibalwa emaqenjini amancane eFrance, kube yilona eliphumela kuqala obala ngokuhluleka kwalo ukukhokhela abadlali imiholo egcwele.
Leli qembu lithe ngenxa yalesi simo liphoqelekile ukuthi lenze imizamo ezozwela kwabanye kodwa ayikho enye indlela.
Imithetho elawula izinkampani zaseFrance iyavuma ukuthi amaqembu azame ngezinye izindlela ukufaka imali uma kubhekenwe nesimo esifana nalesi. Kulapho kuvele khona indaba yokuthi uZungu nabanye bayafana nabantu abangasebenzi uma leli gciwane linganqandeki.
Kuthiwa ezinye zezindlela zokonga imali, imiholo yabadlali kwi-Amiens izokwehliswa ngo-16% ngokusho kukamengameli waleli qembu, uBernard Joannin.
“Uma usibhekisisa kahle isimo esibhekene naso uzocacelwa wukuthi ayikho enye indlela ebesingenza ngayo. Isimo esibhekene naso sihlasele umhlaba wonke nawo wonke amabhizinisi kodwa ngebhadi nathi ebholeni siyathinteka. Asikwazi ukuthi abadlali abadele impilo yabo beze emsebenzini, ekubeni isimo sihluke futhi sisisha kuwona wonke umuntu,” kusho lo mengameli.
Usathukile unesi obhaklazwe yisiguli ewodini
Ubesanda kwazi obulawe yiCorona eMnambithi
Kunethemba ngelikaMeyiwa - AfriForum
UMakaab usishayela ihlombe isiphakamiso seFifa
Abaqwayizi bafuna uhulumeni ababhekele